भरतपुर अस्पतालको लापरबाहीको पराकाष्ठा : डा पाण्डे – Chitwan Post
भरतपुर अस्पतालको लापरबाहीको पराकाष्ठा : डा पाण्डे
अन्तर्वार्ता, प्रमुख समाचार
डा. देवप्रसाद पाण्डे नेपालको विषालु सर्पको अवस्था र सर्पदंशको उपचार पद्धतिको विषयमा विगत १५ वर्षदेखि अनुसन्धानरत छन् । पाण्डेले नेपालको विषालु सर्पको अवस्था र सर्पदंशको उपचार पद्धतिको विषयमा सन् २०१५ मा जर्मनीको फ्र्याङ्कफट विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । भरतपुरमा ३ वर्षीय बालक सलिन विकको सर्पदंशको उपचारको अभावमा मृत्यु भएको र सो सन्दर्भमा सर्पदंशको उपचारको प्रक्रियाको विषयमा चितवन पोष्टले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
१) भरतपुर अस्पतालले बालक सलिन विकको उपचारको क्रममा गरेको भूमिका कस्तो रह्यो ?
– भरतपुर अस्पतालले बालक सलिन विकको सर्पदंशको उपचारको प्राथमिक कार्यविधि नै सुरू गरेन । त्यो गम्भीर लापरबाही हो । भरतपुर अस्पताल सर्पदंशको उपचार केन्द्र पनि हो । नेपाल सरकारले सर्पदंश उपचार कार्यविधिमा बिरामी वा आफन्तले सर्पले डसेको बताएको र लक्षण देखिएको शंका लाग्यो भने कम्तिमा २४ घण्टा निगरानीमा राख्नुपर्छ। । भरतपुर अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सर्पले टोकेको लक्षणहरु देखिएको आशंका गरिएको छ । सबै कुराहरु प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सर्पदंशको उपचारको प्राथमिक उपचार विधि पनि नअपनाउनु ठूलो गल्ती हो । बालकलाई भरतपुर अस्पतालमा तत्काल प्रतिविष दिएको भए बाँच्ने सम्भावना ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्थ्यो । सर्पदंशको उपचार पद्धति जटिल र संवेदनशील छ । यसमा पनि बच्चालाई टोक्यो भने निकै संवेदनशील हुन्छ । म यसलाई भरतपुर अस्पतालको लापरबाहीको पराकाष्ठा भन्छु ।
२) भरतपुर अस्पतालले आईसीयूको अभावमा अरु अस्पतालमा पठाइयो भनेको छ, के यो ठीक प्रक्रिया थिएन र ?
– सर्पदंशको उपचारको क्रममा जटिलता आयो भनेमात्र भेन्टिलेटर, आईसीयूको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो जटिलता सबै बिरामीमा हुँदैन, केहीमा मात्र हुन्छ । सर्पदंशको उपचार नै प्रतिविष दिनु हो । प्रतिविषको असरले जटिलता आउन सक्छ भनेर उपचार नै सुरू नगर्नु कहाँसम्मको लापरबाही हो । सर्पदंशको उपचारमा समय निकै मह¤वपूर्ण हुन्छ । उपचारमा ढिलो हुने वित्तिकै विष फैलिएर बिरामीको मृत्यु हुन्छ । सर्पदंशको उपचारको लागि रिफर गर्दा त्यहाँ आईसीयू खाली छ कि छैन आवश्यक जनशक्ति छ कि छैन, सबै बुझेरमात्र पठाउनु पर्छ । अरु अस्पतालमा रिफर गर्दा बाटोमा केही जटिलता हुन सक्छ भनेर स्वास्थ्यकर्मीको साथमा मात्र पठाउनु पर्छ ।
३) सर्पदंशको उपचारको लागि भेन्टिलेटर र आईसीयूको विकल्प के हुन सक्छ ?
– आईसीयू भेन्टिलेटर सर्पदंश उपचारको पहिलो प्राथमिकता होइन, सहयोगी उपचार विधिमात्र हो । चितवनको परिवेशमा भन्नु पर्दा भेन्टिलेटर आईसीयूको भएको करिब पाँच वर्षमात्र भयो । के त्योभन्दा अगाडि सर्पदंशको उपचार नै भएको थिएन र ? भेन्टिलेटरले सर्पदंशको उपचारको क्रममा श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा जटिलता स्थिति उत्पन्न भयो भने मद्धत गर्दछ । यो नभएको अवस्थामा एम्पुव्याग र श्वासप्रश्वास नलीमा पाइप हालेर श्वासप्रश्वास प्रक्रियामा सहजता ल्याउन सकिन्छ । साथै मुख जोडेर वा छातीमा हानेर श्वासप्रश्वास प्रक्रिया सहज गर्न सकिन्छ ।
४) सर्पदंशको उपचारमा अन्य अस्पतालको भूमिका कस्तो रह्यो ?
– मेरो विचारमा अन्य अस्पतालले सर्पदंशको उपचारमा ठूलो लापरबाही गरेका छैनन् । किनभने, सर्पदंशको उपचार केन्द्र नै भरतपुर अस्पताल हो । भरतपुर अस्पतालमा मात्र प्रतिविष पाइन्छ ।
भरतपुर १९ कपको तयारी पूरा
भूमि व्यवस्थापन र रुपान्तरणमुखी भूमिसुधार
रूकुम घटना : आन्दोलन चर्काउँदै दलित समुदाय
संक्रमित दुई हजार नाघे, एकैदिन २८८ जनामा संक्रमण
कोरोनाको भ्रम फैलाएर तरकारी नष्ट